ရွှေနန်းတော် ၂၅ နှစ်ပြည့်ငွေရတုပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအနုပညာရှင်များရဲ့Video လေး ….
June 29, 2019 Thuta Star 0
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းမှာပီပြင်တဲ့ကာရိုက်တာတွေအပြင်ပရိသတ်တွေကိုရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့ရသတွေအပြည့်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရတာကတော့မင်းသမီးချောလေးဖွေးဖွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေချစ်နေရတဲ့မင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မရဲ့ပီပြင်တဲ့ကာရိုက်တာတွေကြောင့်သူ့ဇာတ်ကားတိုင်းကပရိသတ်တွေတစ်ခဲနက်အားပေးနေရတာပါ။ မာနကင်းမဲ့ပြီးဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်နေရတာပါ။ အနုပညာလောကမှာလည်း ဆယ်စုနှစ်တိုင်အောင် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရပ်တည်ထားသူလေးပါ။ ဖွေးဖွေးဟာ သူပါဝင်ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေတိုင်းမှာပရိသတ်တွေကိုဇာတ်ကားတစ်ကားရဲ့ရသတွေပေးနိုင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတိုင်းကိုရုံပြည့်အားပေးနေကြတာပါ။ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း ” ရွှေနန်းတော် ၂၅နှစ်ပြည့်ငွေရတုမှ နောင်ရတုအဆက်ဆက် အောင်မြင်တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေ…ဒီညတော့ လူစုံတက်စုံပါပဲ … ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဝေမျှထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာလည်း တက်ရောက်လာကြတာပဲ […]
အိမ်ရှင်ထီး/မတိုင်း သိသင့်တဲ့ ..ဘယ်ဟာ ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ …မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ တွက်ပြထားတာလေးပါ…
မီတာ ၁ ယူနစ်ဆိုတာ… 1 KWH ၁ ကီလိုဝပ်နာရီ ဆိုလိုတာက တနာရီအကြာကာလမှာ ၁ ကီလိုဝပ်(1000 ၀ပ်) သုံးစွဲလိုက်ရင် ၁ ယူနစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ရဖို့ မီးသုံးစွဲမှုကို အကြမ်းဖျဉ်း တွက်ကြရအောင်။ ၄ ပေ မီးချောင်း ၁ ချောင်းဟာ […]
လင်မယားချင်းစကားများရာမှ..မိန်းမက ယောကျာ်းဖြစ်သူလည်ပင်းကို … ပုလင်းကွဲဖြင့် လှီးဖြတ် ….
လင်မယားချင်းစကားများရာမှ ယောကျာ်းဖြစ်သူလည်ပင်းကို မိန်းမက ပုလင်းကွဲဖြင့် လှီးဖြတ် 29-6-2019 ကျိုက်မရောဆေးရုံးမှအရေးပေါ်လည်ပင်း ပြတ်ရှလူနာအား မော်လမြိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါကြောင်း။တောင်ကလေးကျေးရွာမှ လင်မယားချင်းစကားများရာမှမိန်းမဖြစ်သူကပုလင်းကွဲဖြင့်လည်ပင်းအားလှီးဖြတ်ခဲ့သဖြင့်တောင်ကလေးRescueအဖွဲ့မှကျိုက်မရောဆေးရုံးသို့ပို့ဆောင်ပးခေဲ့ပါကြောင်း။ 2019-06-29 Ko Toe local news 0
ရန်ကုန်မြို့အမွေအနှစ်တံတားလေးဟာဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာ ဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာ သဘာဝအတိုင်း ယိုယိုယွင်းယွင်းလေး အလှမပျက်စွာနှင့် ရန်ကုန်မြို့ခရီးသွားပြည်သူများသာမက ကမ္ဘာအရပ်က ခရီးသွားပြည်သူများကိုပါ စောင့်ကြိုလျက်ရှိ နေပါသည်။တံတားပေါ်တက်ရောက်သော ယဉ်များအန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ရေးအတွက်လည်း လမ်းဝတံတားခြေရင်းနားမှာ မီးသတ် ဌာနကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးထားပါသည်။ တံတားပေါ်တက်နေစဉ် ရုတ်တရက် တံတားပြိုကျခဲ့သော် အရေးပေါ် အစီအစဉ်အနေဖြင့် အောက်မှာမီးရထားသံလမ်းတခု ထားရှိပေးထားပါသည်။ ယာဉ်များပြုတ်ကျပြီး ရထားလာနေသည်နှင့် […]
ရွာသွန်းမြဲ ပုံစံထက် ..မိုးသုံးဆပိုကြီးနိုင်ပြီး ..ရဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ….
၂ ၀ ၁ ၉ ဇူ လိုင် လ ၁ရက်နေ့မှ ၉ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လေဖိအားနည်းလေဝဲ(Monsoon Low)ဖြစ်ပေါ်ပါမယ် တောင် တ ရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းLow pressure cell တွေက ဟိုင်နန်ကျွန်းဖက်ကနေ ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းကို လာရောက်မှာပါ မုတ်သုန်လေကလည်း အားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် […]
အဖြစ်က ဒီလိုဗျ … ကျနော် မလေးရှားကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းကအိမ်သာတက်ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ယောကျာ်းလေးအိမ်သာက လူပြည့်နေတာဗျ…..ကျနော် မျက်နှာပျက်နေတာကို လေယာဉ်မယ်လေးက….တွေ့တော့ သနားပြီး အမျိုးသမီးအိမ်သာကို…အသုံးပြုခွင့် ပေးတယ်ဗျ……….””လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့် တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင် ရေလောင်းပြီးထွက်လာလိုက်ပါတခြားခလုတ်တွေကို ယောင်လို့မနှိပ်မိပါစေနဲ့ရှင်”” …….ကျနော်လဲ အမျိုးသမီးအိမ်သာကဘာတွေ ကွာခြားလို့လဲ တွေးပြီးဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခလုတ် ၄ခု […]
ရိုမန့်တစ်ဆန်လွန်းတဲ့ DESCENDANTS OF THE SUN ပန်းခြံနှစ်ပတ်လည်စုံတွဲပွဲတော်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရ..
ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ DOTS ပန်းခြံရဲ့နှစ်ပတ်လည်စုံတွဲပွဲတော်ကတော့ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါပြီ။ှSong Joong Ki နဲ့ Song Hye Kyo တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Descendants Of The Sun ဇာတ်ကားဟာ ကိုရီးယားမှာသာမက ကမ္ဘာအနှံ့မှာ အောင်မြင်မှုများစွာ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ဒီ (၁၆) ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ။
ဒီ (၁၆) ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ။ လေ့လာပြီး မှတ်သားထားသင့်သော စကားလုံးများ ၁။ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ သေသေချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် ပါးစပ်နဲ့ အလျင်စလိုသက်သေမပြချင်ပါနဲ့၊ ၂။ ကိုယ်မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုလိုက်တာ […]
လာသမျှလူတိုင်းကို အခမဲ့ကုသ​ အလင်းရစေတဲ့ ထီး​ဆောင်းရွာ မျက်​စိ​ဆေးရုံ…
ထီး​ဆောင်း .. တစ်​သက်​လုံး မမြင်​ရ​တော့ဘူးလို့ထင်​ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတစ်​စုံ ထီး​ဆောင်း​ကျေးဇူးေ​ကြာင့်​ ပြန်​မြင်​ရပြီသမီးရယ်​လို့ သူငယ်​ချင်းအ​ဖေ​ပြောခဲ့ဖူးလို့ ကြားဖူးတာကြာခဲ့​ပေမဲ့ မ​ရောက်​ဖူးသလို ဘယ်​နားရှိမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ စစ်​ကိုင်းက​နေ မုံရွာ သွားရင် မြင်းမူ မရောက်ခင် ၃ မိုင် အလို မှာ “ထီးဆောင်း”ဆိုတဲ့ ရွာ​လေး ရှိပါတယ်။ အခမဲ့ မျက်စိကုသပေးတဲ့ […]
ရက်ဘီအားကစားသမားတစ်ဦးကတော့ ဦးနှောက်အကြိတ်ကင်ဆာကြောင့် မကြာသေးခင်ကပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မသေမီတစ်ရက်အလိုမှာ ကျန်းမာစဉ်က တောင့်တခဲ့တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်ဆက်နိုင်ရေးအိပ်မက်ကလေးကတော့ ပြည့်ဝသွားရှာပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟတွေကတော့ အပျော်ဆိုတာထက်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေ ပိုပေးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးမို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပါဘဲ။ သတို့သားနာမည်ကတော့ Navar Herbert ဖြစ်ပြီး၊ အသက် (၂၂)ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ […]